Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Lahitokana ny aina | NewsMada
Vonon’olona, fanolanana, fampihorohoroana…: Tambanjotran-jiolahy mahery vaika ravan’ny zanda ...octobre 21, 2020
Session ordinaire: Un sénat quasi vide ...octobre 21, 2020
Fikambanan-jiolahy, vonoan’olona feno habibiana…: sesilany ny fanamelohana gadra mandra-pahafaty
Sénatoriales – HCC: les requêtes de Rivo R. et consorts rejetées
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Lahitokana ny aina
Par Les Nouvelles sur 13/10/2020
Indray mandeha ihany no velona. Mazava ho azy fa indray mandeha ihany koa no maty. “Aleo maty rahampitso toy izay maty androany”, hoy ny Ntaolo Malagasy. Midika izany fa mamy ho an’ny rehetra ny miaina. Fa raha ity lozam-pifamoivoizana mitranga etsy sy eroa sy ny voka-dratsiny ity no jerena, toa alaim-panahy ihany ny tena hilaza fa toa tsy misy iraharahian-dry zalahy izany. Aiza ka efa saika ho isan’andro no ahenoana na ahitana tranga miseho eny amin’ny lalana eny ambanivohitra sy aty andrenivohitra.
Isan’andro ihany koa, tsy mitsahatra mitatitra tranga nahafaty olona sy/na nandratrana olona ary nahasimbana fitaovana ny gazety eto andrenivohitra sy ny tambajotran-tserasera. Mandeha ny fanentanana isan-karazany ataon’ireo mpisehatra isan-tsokajiny sy ny mpitandro filaminana fa toa tsy misy fiovana ny toe-draharaha. Vao mainka aza mitombo ny maty sy maratra vokatry ny tsy fitandremana.
Raha nalaza ratsy ny loza mahazo ireo fiara Sprinter tany aloha tany, tato ho ato dia ireo moto sy skotera indray no tena niharan-doza matetika. Arak’ilay fomba fitenintsika azy matetika hoe “carrosserie tenany” anefa ny kodiarandroa dia mazàna farafahakeliny maratra ny mpitondra azy. Raha ratsy vintana moa dia mamoy ny ainy. Voa eny ihany anefa izay voa fa ireo izay tsy mbola niharany toa tsy miraharaha fa misetrasetra eny an-dalana rehetra eny. Avy aiza ny fototry ny olana?
Ny zava-misy azo antoka aloha dia maro loatra ireo mahay mitondra fotsiny fa tsy mahafehy familiana kodiarandroa na koa tsy manana fahazoan-dalana hitondra akory. Misy mantsy dia tena mbola zaza tokoa nefa efa mitondra skotera. Dia hatao hahagaga ary ve raha marobe ireo maty na maratra? Misy tokony hojerena maika mahakasika izany. Ny momba ny lalàna mifehy ireny karazam-pitaterana ireny koa tokony hasiana fanaraha-maso akaiky mba tsy ho ara-dalàna ny famaizana raha toa ka izay no lalana farany hampihenana ny maty sy maratra.
Noho ny Covid-19: mitombo ny fampiasana feo sy sary 22/10/2020
Oniversite Antananarivo: fepetra hentitra ho an’ny halatra jiro sy rano 22/10/2020
Tantsoroka eoropeanina: tohanana ny fihariana ambanivohitra 22/10/2020
Karate-Afrika “Kata en ligne”: hofantenana amin’ny fampiofanana ny solontenantsika 22/10/2020
“JIOI 2023”: tsy afaka handray i Maldives, kandidà i Madagasikara 22/10/2020